Momba anay - Xuzhou Easypack Glassware Limited Company
Xuzhou Easypack Glassware Limited Company dia orinasa iray ary varotra mitambatra amin'ny vokatra vita amin'ny vera. Amin'ny maha mpanamboatra antsika izay naorina tamin'ny taona 2012 tao an-tanànan'i Xuzhou, faritanin'i Jiangsu, dia manana traikefa miavaka amin'ny famokarana kaontenera fitaratra izahay. Ny orinasan-tsika dia manana fitaovana famokarana mandroso, injeniera zokiolona mihoatra ny 30 ary mpiasa manodidina ny 300. Mamokatra kaontenera fitaratra maro be izahay, toy ny tavoahangy boribory boribory boston, tavoahangy fitaratra kosmetika, tavoahangy fitaratra zava-pisotro, lakozia vita amin'ny lakozia, tavoahangy fitaratra pharmaceutika, tavoara mason fitaratra, tavoara fitahirizana sakafo fitaratra sy kojakoja mifandraika amin'izany.
Manana tsipika mandeha ho azy dimy izahay ary tsipika semi-mandeha ho azy mba hamokarana giro amin'ny endriny samihafa, maherin'ny 4000 ny karazana bobongolo tavoahangy ho safidinao. Manome serivisy OEM sy ODM araka ny takian'ny mpanjifa izahay.
Mandritra izany fotoana izany, manome ny mpanjifa serivisy fanodinana lalina izahay ho an'ny vokariny, toy ny fanontana landy, fandokoana loko, fanala, fametahana mafana, fametahana lamba ary embossing. Ho orinasa fanta-daza amin'ny sehatry ny haitao fitaratra, manome vokatra tsara kalitao miaraka amin'ny serivisy fijanonana tokana ho an'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao izahay. Manodidina ny 90% ny vokatray no aondrana any Etazonia, Kanada, Royaume-Uni, Alemana, Rosiana, Korea atsimo, Malezia, Thailand, India, Aostralia ary firenena hafa. Miaraka amin'ny fanabeazana avo lenta sy ny laza azo antoka, mino tanteraka izahay fa Easypack dia hanorina finamanana maharitra sy fiaraha-miasa amin'ireo namana sy mpiara-miombon'antoka rehetra ho fampandrosoana samy izy. Ny fisafidianana Easypack no ho làlana mora mankany amin'ny fahombiazana!
Dia mahafinaritra sy fonosana mahafinaritra miaraka amin'ny COMI AROMA!
Tavoahangy fitaratra fitaratra misy paompy, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny menaka tena ilaina, Tavoahangy paompy fitaratra, Tavoahangy fitaratra miaraka amina famoahana paompy, Tavoahangy fitaratra misy paompy famaohana, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny shampoo,